‘डान्स इन्डिया डान्स’को शो मा जज बनेका टेरेन्स लुइसले नोराको नि’त’म्बमा हा’नेपछि…. (भिडियो हेर्नुस्) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/‘डान्स इन्डिया डान्स’को शो मा जज बनेका टेरेन्स लुइसले नोराको नि’त’म्बमा हा’नेपछि…. (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । डान्स इन्डिया डान्स भारतको चर्चित टिभी कार्यक्रम हो । त्यसवाट धेरै कलाकारहरु चर्चित भएका छन । हालै सो कार्यक्रमको एउटा भिडियोको भने निकै चर्चा र विवाद भएको छ । एउटा भिडियो भाइरल बनाउँदै त्यसका बारेमा टिका टिप्पणी भएको छ ।
उक्त भिडियोमा कार्यक्रमका निर्णायक टेरेन्ट लुइस, नोरा फतेही र गिता कपुरलाई देख्न सकिन्छ। सो कार्यक्रममा जजको रुपमा रहेकी मलाइका अरोरा कोरोना संक्रमित भएपछि केही समयको लागि नोरालाई निर्णायकका रुपमा राखिएको हो । दुई भागका लागि मात्र सम्झौता भएको भएपनि मलाइकालाई अझै थप केही दिन आराम गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका कारण उनी केही दिन नआउने भएकी हुन् । त्यसैले नोराले नै निरन्तरता दिएकी छन् ।
भिडियोमा उनीहरुले कसैलाई नमस्ते गरेर स्वागत गरिरहेको देखिन्छ। नमस्ते गर्नका लागि हात उठाउँदा भने टेरेन्सको हात नोराको नि त म्ब मा गएर ठो’क्कि’एको छ। यस भिडियो भाइरल बनेपछि यतिबेला टेरेन्सको चर्को रुपमा आलोचना भइरहेको छ। टेरेन्सले जानाजान नोराको नि’त’म्ब छोएको भन्दै विरोध गरिएको छ ।
यसबीचमा नोरा फतेही आफैंले यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाएकी छिन्। नोराले टेरेन्सको इन्स्टापोस्टमा भनेकी छिन्,‘धन्यवाद टेरेन्स, आजको समयमा मेम बनाउन भिडियो तोडमोड गर्ने र फोटोसप गर्ने गरिन्छ। मलाई खुशी लागेको छ दाई तपाइँ यो समयमा संयमित र मर्यादित रहनुभयो।
यो विषय चाँडै टरेर जानेछ। तपाइँ र गिता म्याम मेरालागि आदरणीय पात्र हुनुहुन्छ जसले मलाई डीआइडीमा निर्णायकको रुपमा स्वीकार गर्नुभयो।’ टेरेन्सले उक्त इन्स्टापोस्टमा एउटा पुरानो कथाको विषयवस्तु समेटेका छन्। नोरालाई उचालेको फोटो सार्वजनिक गरेका उनले आफू विकृत व्यक्ति नभएको उल्लेख गरेकी छन् ।
भाइरल आमाछोरी दोहोरी गाउन इन्द्रेनीमा पुग्दा यस्तो भयो,श्रीमानलाई सम्झेर रूवाबासी-भिडियो हेर्नुहोस